01 | mai | 2020 | InfoKmada
Accueil 2020 mai 1
Archives quotidiennes: 1 mai 2020
Fanadinana Baccalauréat: nohalavaina ny fotoana fisoratana anarana
InfoKmada - 1 mai 2020 0
Mitohy ny fisoratana anarana ho an’ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana bakalorea taona 2020 raha ny nambaran’ny teo anivon’ny ministeran’ny fampianarana ambony. Tsy mbola fantatra hatreto ny daty famaranana izany fisoratana anarana izany.
Nike : vonona hanao ny fampitaovana ho an’ny Barean’i Madagasikara
Naneho ny fahavononany amin’ny fampitaovana sy ny fampiakanjoana ny Barean’i Madagasikara ny marika fanta-daza maneran-tany Nike. Omaly no nahafantatra izany ny eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny Taranja baolina kitra. Andrasana manoloana izany ny fanapahan-kevitra horaisin’ny FMF momba ity « équipementier » ity.
Covid Organics: mitohy ny fanapariahana izany eny amin’ny sekoly
Mitohy hatrany ny fizarana ny Covid Organics eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ankoatry ny fizarana ho an’ny isan-tokantrano , isany imasoan’ny fitondram-panjakana ny fizarana izany eny anivon’ny sekoly. Ho an’ny CISCO Ambohidratrimo, ny CEG Talatamaty sy ny lycée Ambohidratrimo indray no nisitraka izany.
OSTIE : tsy mandray ny fangatahana fanemorana tetiandro
Efa nisy ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana mahakasika ny fenemorana ny tetiandro fandoavana saran'ny mpikambana izay tokony haloan’ny orinasa tsy miankina eny anivon’ny CNaPS sy ny OSTIE. Tsy mandray izany fangatahana izany anefa ny eny amin’ny OSTIE raha ny fitarainan’ireo orinasa maro.
Ambovombe Androy : tsy mponina ao an-toerana ilay namoy ny ainy
Nazava ny tenin’ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena manoloana ny raharaha Ambovombe Androy. Olona nafaran’ny solombavambahoaka hanakana ny tetikasan’ny filoham-pirenena ireo nifandona tamin’ny mpitandro filaminana omaly. Nohamafisiny hany koa fa ny ben’ny tanàna tamin’izany fotoana no nivarotra ny tany. Ary nanamafy hatrany ny zandary fa tsy nesorina amin’ny hery ireo olona ireo fa efa nisy fijerena manokana azy ireo.